စက်ပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများတရုတ်ငုံ့ပိရမစ်အမျိုးအစားပြား - အရည်အသွေးမြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း - Parfit
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ပန်းကန် Bende စက် >3Roll ပြား Bende စက် > စက်ငုံ့ပိရမစ်အမျိုးအစားပြား
အောက်ပါ related စက်ငုံ့ပိရမစ်အမျိုးအစားပြားအကြောင်း, သင်တို့ကိုငါပိုကောင်းတဲ့ပိရမစ်အမျိုးအစား Bende စက်ပန်းကန်ကိုနားလည်ကူညီရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
စက်ကွေးတစ်ဦးကပိရမစ်ပုံစံပန်းကန်ကျယ်ပြန့်အလိုအလျောက် industry.Unfortunately များတွင်အသုံးပြုသည်လျော့နည်း thickness.Moreover တစ်စာရွက်သတ္တုတင်နိုင်ရန်မသင့်လျော်သော Bende စက်လည်းမရှိ, အထွက်ကွေးစက်အရွယ်အစားကြီးမားသောဖြစ်ပါသည်, အာကာသအများကြီးလောင်ကြောင့်အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ် ကြီးမားသောအတိုင်းအတာထုတ်လုပ်မှုသည်။
ပန်းကန် Bende သတ္တုပလပ်စတစ်ပစ္စည်းနှင့်၎င်း၏အသွင်သဏ္ဌာန် deforming ဖွငျ့ကွေးနိုင်ပါတယ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိကိုကျော်လွန်ပေမယ့်အဆုံးစွန်ဆန့အစှမျးသတ်တိကိုအောက်ကအလေးပေးခံရဖို့ဆိုပါစို့။ (လိပ်ကွေးအဖြစ်သိကဲ့သို့) ဖွဲ့စည်းလိပ်ပုစနစ်တကျလှပတဲ့ rolls.Sheet နှင့်ပန်းကန်များအကြားအလုပ်အပိုင်းအစဖြတ်သန်းနေဖြင့်အမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်သို့ပန်းကန်, စာရွက်များ, အရက်ဆိုင်, ထုပ်, ထောင့်သို့မဟုတ်ပိုက်ဖွဲ့စည်းဘို့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်မကြာခဏကဖွဲ့စည်းကြိတ်ဆုံထုတ်ကုန်များမှာ စက်ကွေးသုံးလိပ်။
စက်ကွေး 1. လူပျိုဖြစ်တော့3လိပ်ပန်းကန်
2. နှစ်ချက်3လိပ်ပြားကွေးစက် pinch
3.4လိပ်ပြားကွေးစက်တွေ
2. အဆိုပါနှစ်ခုအောက်ခြေ roller ထိပ်လိပ်ကြောင့်လွတ်လပ်စွာလှည့်ပါဘူးဘယ်မှာတန်ခိုးကို ခံရ.
3. ဆလင်ဒါသို့မဟုတ်တစ်မျိုးကတော့သို့အဆိုပါပုံပျက်သောပြား, ထိပ်လိပ်တစ်ဦးနှိမ့်ချရပ်ကွက်ဝန်အားဖြင့်ဘာသာရပ်များဖြစ်ရပါမည်, ဒီနှစ်ခုရပ်တည်ချက်ရဲ့ထိပ်မှာတည်ရှိပါတယ်သောအာဏာဝက်အူ, တဆင့်သင်္ဘောသားဖိအားအဖြစ်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နေသည်
4. ထိပ်လိပ်အောက်ခြေလိပ်ထက်ပိုဝန်ရှိသည်, ဒါကြောင့် သို့ဖြစ်. ကညာဘက်ခြမ်းအပေါ်တစ်ဦးပတ္တာအပေါ်ထောက်ခံနေသည်ကြီးမားသော diameter.and ၏ဖန်ဆင်းသည်ပတ္တာကိုလည်းအိုးအိမ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပေါ်ထောက်ခံပံ့ပိုးမှုမှဝံသယ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ် ယင်းရိုးတံများနှင့်ရွေ့လျားအတူတကွလိပ်နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်အတူ
1. အထက်ကြိတ်စက်ချိန်ညှိအားဖြင့်၎င်း, အထက် roller ပန်းကန်ပေါ်ကြိုတင်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်ပန်းကန်ထည့်ပါ
2. အဆိုပါပန်းကန်အထက်ကြိတ်စက်ဆီသို့ဦးတည် bends နှင့်တဦးတည်းပြည့်စုံသံသရာပြီးနောက်အချင်းဝက်တိုင်းတာ
4. နောက်ဆုံးရလဒ်များအတွက်လိပ်ညှိခြင်းနှင့်လိုအပ်သော Clamp အင်အားသုံးအောင်
hot Tags:: ပိရမစ်အမျိုးအစား Bende စက်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, တရုတ်လုပ်, လက္ကား, စိတ်ကြိုက်ဝယ်, စျေးပေါ, လျှော့စျေးနိမ့်သောစျေးနှုန်း, လျှော့စျေးဝယ်အရည်အသွေးမြင့်မား, စတော့ရှယ်ယာထဲမှာအစုလိုက်အခမဲ့နမူနာ, စျေးနှုန်း, စျေးစာရင်း, ပန်းကန် quotation အ, အမှတ်တံဆိပ်, နောက်ဆုံးပေါ်, classy, ​​အဆင့်မြင့်, အကြမ်းခံ, နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း
စက်ကွေး3လိပ်ပန်းကန်စက်ကွေးအချိုးကျ3လိပ်ပန်းကန်အထက် roller တစ်လောကလုံးပန်းကန်ကွေးစက်စက်ကွေးဟိုက်ဒရောလစ်3လိပ်ပန်းကန်ကြီးမားသော worpieces များအတွက်စက်ကွေး3လိပ်ပန်းကန်
အထက်ကြိတ်စက်က Universal ပြားငုံ့စက်
အကြီးစား Worpieces သည်စက်ငုံ့3Roll ပြား